पूर्व युवराज पारसले बाडे राहत संगै माक्स र स्यानिटइजर, पारसलाई यस्तो भव्य स्वागत ! के बोले पारसले ? भिडीयो सहीत – Complete Nepali News Portal
पूर्व युवराज पारसले बाडे राहत संगै माक्स र स्यानिटइजर, पारसलाई यस्तो भव्य स्वागत ! के बोले पारसले ? भिडीयो सहीत
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि राजपरिवार माथि विभिन्न आरोपहरु लागेका छन् । राजपरिवारका सदस्यलाई लागेका आरोपहरु न त प्रमाणित भएका छन्, न त आरोप लगाउनेले झुटो नै भन्न सकेका छन् । यस्तै आरोपहरुको भारी थियो पूर्व युवराज पारस शाहको । तर उनले पोखरामा अहिले जनताको मन जित्ने काम गरिरहेका छन् । उनले दुखी र गरिब नागरिकको मनमा मलम लगाइदिएका छन् ।